RAKOTOMIANDRISOA JEAN ERNEST : Tsy kandidà intsony no resahina fa mila Dada tonga eto isika – MyDago.com aime Madagascar
RAKOTOMIANDRISOA JEAN ERNEST : Tsy kandidà intsony no resahina fa mila Dada tonga eto isika
Mivadika ambony ambany ny raharaham-pirenena hoy ny Ct Rakotomiandrisoa Jean Ernest androany teny amin’ny Magro Behoririka. Izao anefa no tsy maintsy atao hoy izy, tsy maintsy amboarina ny fo sy ny saina amin’ny zavatra rehetra mitranga. Ny ahy dia tsotra ihany hoy Ernest dia hoe aleo amin’izay hirombo fa tsy mety intsony. Saingy izao kosa hoy izy ny mampiavaka ny zanak’I Dada amin’ireo jiolahimboto ireo dia isika manaiky an’I Dada, rehefa milaza izy hoe tsy izy amin’izay io dia mirombo isika, ka noho izany dia mila vonona. Na dia teo aza ny tsy fitovian-kevitra eo amintsika dia ny iraisana dia ny hoe Dada litany eto. Izao hoy ity olomboantendry avy any Vakinankaratra ity dia milaza indray ny fikambanana iraisam-pirenena fa raha tsy mihoatra ny 20% dia tsy lany. Matahotra sahady izy ireo fa hoy aho hoy izy hoe izahay tsy matahotra fanasaziana. Izaho raha mbola mananan fofon’aina dia tsy hanaiky ny frantsay. Nambarany ihany koa fa hiova ny tolona ato ato ka mil any firaisankinantsika izany. Tsy kandidà intsony no resahina hoy izy fa mila Dada ho tonga eto isika.
TSY HIALA ETO AMIN’NY MAGRO ISIKA RAHA TSY TONGA I DADA
TSY MIALA ETO ISIKA RAHA TSY TONGA I DADA
MILA MAILO MANDRAKARIVA ISIKA
Auteur Solo Razafy*Publié le 24 août 2013 Catégories Politique
3 réflexions sur « RAKOTOMIANDRISOA JEAN ERNEST : Tsy kandidà intsony no resahina fa mila Dada tonga eto isika »
24 août 2013 à 11 h 27 min
Lany andro amin’ny kabary ny movansy Ravalomanana, tezitra ny olona raha tsy fantatrareo izany, mieritrereta!!!!mba mihainoa radio, mba jereo eny amin’ny fiaraha-monina eny dia ho fantatrareo ny hevitry ny VAHOAKA = ACTION
24 août 2013 à 15 h 54 min
ianareo ireto ? aty doha ve ny ao @ lohanareo ?efa nolazaina GOLDBLATT HOE AO ARINAN NY FIFIDIANA I RAVALOMANANA VAO MAHAZO MODY .
TENA DIKY VE NY FIEVERANAREO NY VAHOAKA E ? ka handanian andro dia hoe ny fodian ni Atoa Marc Ravalomanana no hatao resaka . Izy tsy ho candidat i Rtoa tsy candidat fa voahilika daholo .
tena ity resakareo ity no hatao hoe resake.
samoela dit :
24 août 2013 à 16 h 31 min
farafaharatsiny nanendry olon kafa rehefa tsy afaka i Neny, nisy namahan dalitra mihitsy tao.
Mbola maro no mpanohana anao ry Dada kanefa tena efa trotraka sy reraka izahay, tsy ahazaka krizy lavareny intsony.
Manohàna olona iray @ ireo aloha fa tsy mety ny politique de la chaise vide.
Mbola nanana occasion niovana hevitra isika hatr@ talata teo, izao isika tara loatra.
Précédent Article précédent : PARLEMANTERA MOVANSY RAVALOMANANA : Tsy hakatoavan’ny rehetra io fifidianana io
Suivant Article suivant : Hiditra mivantana etsy an-kianja Magro i Dada anio